Global News Nepal चाडपर्व Archives - Global News Nepal
दसैंका लागि मासु व्यवसायीले गरे मासुको मूल्य निर्धारण, के को मासुलाई प्रतिकिलो कति पर्ने ?
साना दरका मात्र सवा ८ अर्ब नयाँ नोट साटियो, यस वर्ष नयाँ नोट साट्नका लागि कुनै समस्या छैन
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारसम्ममा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट सटही गरेको छ। हिन्दुहरुको महान चाड दसैं नजिकिएसँगै राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुसार ५, १०, २०, ५०...
काठमाडौं : सरकारी स्वामित्वमा रहेको दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दशैंको मुखैमा घिउको उपभोक्ता मूल्य बढाएको छ । प्रतिलिटर ९ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको तयारी घिउको उपभोक्ता मूल्य एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको संस्थानका महाप्रबन्धक रुद्र प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्...
आज इन्द्रजात्राको अन्तिम दिनः महिलाले ताने भैरव, गणेश र कुमारीको रथ (तस्बिरमा हेर्नुहोस्)
काठमाडौं : शुक्रबार इन्द्रजात्राको आठौं अर्थात अन्तिम दिन हो । आज इन्द्रध्वजा फहराएको लिङ्गो ढाली इन्द्रजात्राको विधिवत रुपमा अन्त्य गरिन्छ । साढे १० बजे राति लिङ्गो ढाल्ने बताइएको छ। इन्द्रजात्राको अन्तिम दिन आज भैरव, गणेश र कुमारीको रथ महिलाहरुले तानेका...
दसैँमा घर फर्कने यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ असोज १० गतेदेखि खुल्दै, भाडा कति प्रतिशतले बढ्ने ?
काठमाडौं : दसैँमा घर फर्कने यात्रुहरूलाई लक्षित गर्दै असोज १० गतेदेखि सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिने भएको छ । विगतमा दसैंको मुखमा टिकट बुकिङ खुल्ला गरिन्थ्यो । दसैंको मुखमा टिकट बुकिङ खुल्ला गर्दा सर्वसाधारण ठगिनुका साथै सार्वजनिक यातायातको...
आज तीजको दर खाने दिनः कस्तो खानेकुरा खाने, कस्तो नखाने ? (अवश्य पढ्नुहोस्)
काठमाडौं : नेपाली हिन्दु महिलाहरुको ठुलो चाड तिजले छपक्कै छोपिसकेको छ। तिजको अघिल्लो दिन आज दर खाने चलन छ। महिलाहरुका लागि तिजको रमाइलो भनेकै दर खाने, पानी समेत नखाई ब्रत बस्नु अनि नाचगान गर्नु नै हो। तर चिकित्सकहरुका अनुसार दरका...
कुशे औंसीको दिन आज गोकर्णेश्वर मन्दिरमा श्राद्ध गर्नेको घुइँचो (तस्बिरसहित)
काठमाडौं : कुशे औँसी अर्थात् भाद्र कृष्ण अमावस्याका दिन पिताको सम्मान गर्ने पितृको सम्मान गर्ने, पितृलाई तर्पण दिने, पिण्ड दिने वर्ष दिनमा सबैभन्दा उत्तम दिन नै यसलाई मानिन्छ । यस दिन बाबुको मुख हेर्ने दिन भनेको अरू बेलामा बाबुसँग त्यति...